တိုဟူးသုပ်၊ ဒန့်သလွန်သီးအနု၊ သခွပ်ပွင့်၊ ပေါက်ပန်းရွက် ~ စန္ဒကူး
I wanna eat all of them.
Yes, you are so lucky Kuu.
Your title is so inviting and I just ran here once I saw the title. :D
တို့ဟူးသုပ် ကိုမြင်ယုံနဲ့ စားချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ကျေးဇူးပါမမရယ်။
thank you... having the chance to see pauk pan nyunt in picture..